मल्टिप्लेक्स आकर्षण, नयाँ हल सञ्चालक उत्साहित - Filmyfanda : Always Exclusive Entertainment News Portal SiteFilmyFanda
मल्टिप्लेक्स आकर्षण, नयाँ हल सञ्चालक उत्साहित
फिल्मी फण्डा । प्रविधिमा आएको परिवर्तसँगै फड्को मार्न नसक्दा सिंगल थिएटरहरु विस्थापित हुने क्रम बढिरहेको छ । मध्यम वर्गीय पुस्ताको उदयको कारणले पनि पछिल्लो समय मल्टीप्लेक्सतर्फ दर्शक आकर्षित भइरहेका छन् । बस्न असजिलो हुने सिट, कमजोर पूर्वाधार व्यवस्थापन र फिल्म हेर्दा पनि कष्टकर रुपमा समय वितानु पर्ने भएकोले हाल मल्टीप्लेक्समा दर्शकको आकर्षण देखिन्छ ।
यसैबीच राजधानीको नयाँ बानेश्वरमा आइप्लेक्स भवनमा वान सिनेमाज् सञ्चालनमा आएको छ । दशैँ लगत्तै राजधानी र मोफसल गरि सात मल्टिप्लेक्स सञ्चालनमा आउँदै छन् । रेगल सिनेमाले भक्तपुर, बिराटनगर र भैरहवामा ७ पर्दासहितका तीन मल्टिप्लेक्स सञ्चालनमा ल्याउँदै छ । यी हलहरुको व्यवीथापन क्यूएफएक्सले गर्नेछ भने क्यूएफएक्सकै तीन हलहरु समेत सञ्चालनमा अउँदै छ । त्यस्तै राजधानीको गोंगबुमा नर्थ सिनेमा र ल्होत्से नाम दिइएको चार स्क्रिनसहितका दुई मल्टिप्लेक्स सञ्चालनमा आउँदै छ ।
हल सञ्चालकले कहिले झिँगा मारेर बस्नु परेको र कहिले कर्मचारि व्यवस्थापन गर्नको लागि पैसाको अभाव हुने गरेको समेत बताउँदै आएका छन् । रजतपटमा फिल्मको कारोबार पनि सन्तोषजनक हुन सकिरहेको छैन । मुख्य रुपमा हलहरुको आम्दानीको श्रोत भनेको टिकट नै हो यसबाहेक विज्ञापन र फिल्मको विभिन्न गतिविधिहरुमा हल उपयोग गरे वापत प्राप्त हुने रकम पनि हलहरुको आम्दानी र दर्शक लक्षित गरि सञ्चालन हुने फूड कोर्टहरु हुन् । अहिले नेपालभर मल्टीप्लेक्स र सिंगल पर्दा गरि दुई सय हल सञ्चालनमा छन् । १५ मल्टिप्लेक्स थपिने क्रममा रहेका छन् ।
हलहरु घाटामा गइरहेको भनिएको अवस्थामा नयाँ हल थपेर जोखिन किन मोलेको त ? वान सिनेमाज्का सञ्चालक प्रज्वल शमशेर भन्छन्, ‘हलहरु घाटामा गइरहेका जस्तो लाग्दैन, हलको अवस्था कस्तो छ, सेवा सुविधा के छ ? कुन जमानाको हल हो ? लोकेशन र फिल्मले पनि प्रभाव पार्छ जस्तो लाग्छ । जिर्ण अवस्थाका हलहरुको घाटामा गएको समाचार आएको जस्तो लाग्छ । जोखिम भन्दा पनि दर्शकहरुलाई हलसम्म आकर्षण गर्ने प्रयास हो ।’ बुधबार (असोज १५) बाट वान सिनेमाज् औपचारिक रुपमा सञ्चालमा आएको छ । प्रज्वल थप्छन्, ‘हामी एकदम उत्साही छौँ, दर्शक प्रतिक्रिया सकरात्मक आइरहेको छ । प्रदर्शन भइरहेका फिल्महरुको व्यापार पनि राम्रो भइरहेको छ । एक दुईओटा नचलेको कुरालाई लिएर सारा क्षेत्र नै धराशायी भयो भन्न मिल्दैन ।’ मल्टीप्लेक्स हलहरुमा नेपाली फिल्मलाई कम प्राथमिकता दिइरहेको गुनासो आइरहन्छ वास्तवमा नै यस्तै हुन्छ त ? प्रज्वल भन्छन्, ‘म आँफै पनि नेपाली फिल्म क्षेत्रको निर्माता हुँ, तर त्यस्तो हुँदो रहेनछ । माग भयो भने त नेपाली फिल्मले बढी नै शोज्हरु पाउँछन् ।’